Bartamaha Afrika-siyaasada | KONGOLISOLO
Covid -19: Xaaladda degdegga waxay si rasmi ah u dhammaanaysaa July 21 saqbadhkii, taas micnaheedu maahan in COVID -19 uusan ku dhex jirin derbiyadeena, marka la soo koobo farriinta ka socota Madaxa Gobolka Félix Antoinne Tshisekedi … (VIDEO)
Posted By: Admi1waa: July 21, 2020 20: 04 No Comments
Dib-u-bilaabida tartiib-tartiib ah ee howlaha uu shaaciyay Madaxa Gobolka. Tani waa iyada oo loo eegayo taariikho gaar ah: 1. Luulyo 22: dib u bilaabashada howlaha ganacsiga, makhaayadaha, dib u bilaabashada kulamada ...	Akhri wax dheeraad ah
Waajibka ah in la xasuusto: dagaal wakiilo sida uu qabo Vital Kamerhe; Gobol Kongo ah oo leh siyaasad soo jireen ah oo yaqaan roobka iyo cimilada wanaagsan, Vital Kamerhe muuqaalkiisa, wuxuu muujiyaa inuu si wanaagsan u horumarsan yahay xiriirka caalamiga ah… (VIDEO)
Posted By: KongoLisolowaa: July 3, 2020 10: 45 No Comments
Vital Kamerhe wuxuu had iyo jeer ugu dhowaa mawduucdiisa; Waxay si cad u muujineysaa mawduucyada "Dagaal by wakiil", ciyaarta salka u ah awoodaha weyn, axsaabta badan iyo ...	Akhri wax dheeraad ah
Kongo: waa sidee haddii Brazzaville ay beddesho magaceeda? Bishii Abriil 23, 2014, Madaxweynaha Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso, oo khilaaf ka dhex abuurmo sahamiyahii sahanka ahaa ee Pierre Savorgnan de Brazza, wuxuu ku hanjabay inuu u magacaabi doono caasimada Kongo
Posted By: KongoLisolowaa: July 3, 2020 00: 00 No Comments
Magaalada Brazzaville, oo ahayd "Caasimadii" Charles de Gaulle ee Free France intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka, ayaa waayi kara magacii. Dhammaan goobaha dadweynaha ee magaca ku…	Akhri wax dheeraad ah
Bogga taariikhda ee DRC: maxaa laga hayaa dowladda Moïse Tshombe (1964 - July 1965)? Wuxuu ka mid yahay astaamaha sumcadda ee taariikhda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo (DRC) ka dib xorriyadda waddanka ee Juun 30, 1960
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 24, 2020 16: 10 No Comments
Isagu waa ninka xoogga leh go'itaankii Katangese, kaliya 11 maalmood madaxbanaanida Kongo. Wuxuu musaafuris ku tegey ka dib markay wax khalkhal galeen dilkii Patrice Emery Lumumb ...	Akhri wax dheeraad ah
Sanadyadan heesaha iyo qoob ka ciyaarka sharafta leh ee Zairian Leopard; dhaqankii shakhsigu wuxuu ku riyooday Mobutu inuu lahaado awood daa'im ah, isagoo illaa iyo hadda illaaway illaa yaraantii daciifka ahayd ee nin "Dhimasho"
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 24, 2020 14: 35 No Comments
Ku farax farxadda qoob-ka-ciyaarka iyo heesta dadka, taasi waxay ahayd hal-ku-dhiggii Mobutu Sese Seseko, hoggaamiyihii hore ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo, markaa Zaire. Mobutu wuxuu ku guuleystay magnetizing iyo ...	Akhri wax dheeraad ah
Mobutu wuxuu la kulmay gaalnimada cibaadada iyo jinniyada; kuwa ka dhigay Mobutu ilaah, waxay ahaayeen naftooda kuwa ugu yeeray shaydaan ka hor intaanay baabi'in
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 24, 2020 12: 18 No Comments
Ilaa iyo inta Mobutu u adeegay danaha reer galbeedka, wuxuu ahaa hogaamiye ku dayasho mudan iyo sharaf Afrika. Mobutu waxaa adeegsaday Maraykanka iyo reer galbeedka iyadoo ...	Akhri wax dheeraad ah
Aug13 03: 33